WinZip pro 18.0 build 10661(x32 /x64) full with Crack/serial ~ လမင်းတရာ
WinZip pro 18.0 build 10661(x32 /x64) full with Crack/serial
IN Utilities - ON 10:34 PM No comments
WinZip pro 18.0 build 10661(x32 /x64) | 41 MB / 44.2 MB
ဗားရှင်းအသစ်ထပ်ရလာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေကို အကောင်းဆုံး Compress လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နာမည်ကြီး Software ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
အရှေ့မှာလည်းတင်ပေးခဲပြီးသားပါ။ အခု နောက်ဆုံးထွက် Version လေးရလာလို့ထပ်တင်ပေး
လိုက်တာပါ။ ဒီကောင်လေးမှာ Dropbox, box, Google Drive တို့ကဖိုင်တွေကိုတိုက်ရိုက်
zip လုပ်နိုင်သလို လုပ်ပြီးသား zip ဖိုင်တွေကို တခါတည်း Share လုပ်နိုင်သလို document ဖိုင်တွေ
ကိုလည်း PDF ဖိုင်တွေအဖြစ် Convert လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Windows Performance ကို စစ်ဆေးနိုင်နဲ့Optimize Tools တွေနဲ့အခြားအသုံးဝင် Tools တွေအများအပြားပါဝင်ပါတယ်။
NEW! See the content of Zip file attachments in Outlook 2007 using the Zip file previewer
NEW! Double click onafile in the Zip file previewer for Outlook 2007 to open it for viewing
Resize Photos when using Zip & E-Mail
WinZip 17.5 integrates seamlessly with:
Download x32 bit Trial>>> mighty (or) uppit (or) tusfiles
Download x64 bit Trial>>> mighty (or) uppit (or) tusfiles
Download Crack/Serial>>> solidfiles (or) uppit (or) tusfiles